Ahoana no ahafantarana raha nandalo ny teoria aho - VidaBytes | LifeBytes
Encarni Arcoya | 29/05/2022 10:27 | Nohavaozina amin'ny 31/05/2022 08:35 | vaovao
Rehefa manao andrana momba ny teôlôjia momba ny fahazoan-dàlana mitondra fiara ianao, dia fantatrao fa tokony hijanona ivelan'ny efitrano anaovanao fitsapana ny nerveo. Fa raha mivoaka ianao, dia saronan-dry zareo: efa nandalo va aho? Ahoana raha tsy nahomby aho? Rahoviana aho no mahazo ny naoty? Ahoana no ahafantarako raha nandalo ny teoria aho? Tsy maintsy mangataka kilasy fiara pratika ve aho izao?
Aza manahy fa ny fanadinana théorie no dingana voalohany ary izany, raha mbola miomana sy tsy tafiditra ao anatin’ny fandrika napetraky ny DGT, dia mora ny mandalo. Fa, mora kokoa aza ny mahafantatra ny vokatra faran'izay haingana.
1 Ny fitsapana mitondra fiara teorika, ny dingana voalohany hahazoana ny fahazoan-dàlana
2 Efa nanao ny théorie aho, rahoviana izy ireo no manome ahy ny naoty?
2.1 Inona no mitranga raha variana aho ka tsy mijery?
3 Ahoana no ahafantarana raha nandalo ny teoria aho
3.1 Inona no angatahin'izy ireo hidirana amin'ny naotin'ny teorika?
3.2 Ahoana no hijerena ireo lesoka nataoko?
Ny fitsapana mitondra fiara teorika, ny dingana voalohany hahazoana ny fahazoan-dàlana
Araky ny fantatrao, Mila mandalo fitsapana roa tsy maintsy atao ny fahazoana ny fahazoan-dalana mamily anao. Raha ny marina tsy afaka manao ny iray ianao raha tsy manaiky ny iray. Miresaka momba ny fanadinana teorika izay anontaniany anao momba ny kaody mitondra fiara, famantarana, sns.; ary ny fitsapana azo ampiharina izay tsy maintsy hitondranao ny fiaran'ny sekoly mitondra fiara mba hanombanana ny fomba fitondranao.
Midika izany fa tsy “manjaitra sy mihira” izany. Na dia maro aza ny olona maka fotoana kely hamoahana izany, satria mianatra haingana izy ireo na satria efa fantany izany, dia maro ny hafa no maka fotoana. Ary indraindray dia mety hamitaka anao ny nerveuses.
Ny voalohany amin'ny fanadinana atao dia ny teorika.. Tsy misy daty marina hanaovana izany, na izany aza, rehefa misoratra anarana amin'ny sekoly mitondra fiara ianao dia manana fe-potoana x volana hanehoana ny tenanao sy hahazo ny fahazoan-dàlanao. Araka izany, mety haharitra herinandro, roa, iray volana, roa... hatrany arosonao ny manao izany rehefa tena vonona ianao ary koa ny fitsapana izay ataonao amin'ny fanazaran-tena dia tsy misy fahadisoana mihoatra ny 2.
Rehefa vita, ahoana no ahafantarako raha nandalo ny teoria aho? Tsy mila miantso ny sekoly mitondra fiara imbetsaka ianao mba hilazany aminao raha efa misy ny valiny. Raha ny marina dia azonao jerena ao amin'ny DGT izany. Ahoana? Hazavainay aminao izany.
Efa nanao ny théorie aho, rahoviana izy ireo no manome ahy ny naoty?
Vantany vao mivoaka ny efitrano nanaovana ny fanadinana ara-teorika momba ny fiara ianao, dia voatafika amin'ny fisalasalana sy ny tahotra ny hahafantatra na lany ianao na tsia.
Ny marina dia miankina amin'ny fomba nanaovana ny fitsapana izany. Ho hitanao: raha nanao izany tamin'ny ordinatera ianao, ny valin'izany dia mivoaka aorian'ny 17.00:XNUMX hariva. tamin'io andro io ihany; raha efa tamin'ny taratasy, ny vokatra dia, fara fahakeliny, manomboka amin'ny 17.00:XNUMX hariva ny ampitso.
Amin’ity tranga faharoa ity dia midika izany fa mety ho any izy ireo ny ampitson’iny, saingy tsy ara-dalàna izany, izany hoe ny ampitso, roa andro, telo andro, herinandro...
Raha eo amin'ny taratasy ilay izy dia mitadiava faharetana satria mety ho elaela izany.
Inona no mitranga raha variana aho ka tsy mijery?
Mety ho ny zava-misy ianao dia manolotra ny tenanao amin'ny teorika ary mandeha miala sasatra nefa tsy te hahalala ny naoty. Afaka mijery azy ve ianao any aoriana? Eny ary tsia... Hazavainay.
Ao amin'ny DGT IApetraka mandritra ny tapa-bolana ny valim-panadinana. Noho izany, raha tsy mijery ny naoty alohan'ny tapa-bolana ianao, dia hanjavona izy ireo ary tsy ho fantatrao ny vokany. Midika ve izany? Tokony hiezaka hiresaka amin'ny DGT na ny sekoly mitondra fiara ianao mba hanandrana haka ilay naoty, na dia ara-dalàna ho an'ny sekoly mitondra fiara aza ny manana izany amin'ny ordinaterany, ka tsy dia misy olana loatra.
Efa fantatrao ny teny izay ahafahan'izy ireo manome anao ny naoty momba ny teorika. Ahoana anefa raha te hijery ianao? Io dia mety ho?
Ny marina dia eny, ary tena mora izany misaotra amin'ny Internet satria ny tokony hataonao dia miditra amin'ny pejy DGT. Amin'ny ankapobeny dia tsy maintsy mandeha any ianao sede.dgt.gob.es/en/driving-licences/exam-notes.
Ity pejy ity dia mitondra anao mivantana any amin'ny fizarana tadiavintsika. Ary eto ianao dia afaka misafidy safidy roa:
Tsy misy taratasy fanamarinana. Aiza no tsy maintsy hanome fanazavana sasany mba hanome anao ny naoty.
Mifanatrika Aiza no tsy maintsy halehanao hijerena azy mivantana any amin'ny DGT.
Araka ny tiantsika ho mora sy haingana, tokony hifidy ny safidy voalohany ianao.
Inona no angatahin'izy ireo hidirana amin'ny naotin'ny teorika?
Araka ny efa nolazainay taminao teo aloha, ny safidy tsy misy taratasy fanamarinana dia ahafahanao mahita ny naoty teoriao fa, alohan'ny hampisehoana azy aminao, Hangataka angon-drakitra maromaro ianao mba hahazoana antoka fa ianao io. Inona no angona? Manaraka:
NIF/NIE. Izany hoe ny laharana karapanondro anananao.
Daty fanadinana. Ny andro tena nisehoanao. Eto ianao dia tsy maintsy mametraka izany, tsy mila izay nanaovanao izany izy ireo.
Fahazoan-dalana kilasy. Raha nanao fanadinana A, B, C, D... Ny ho an'ny môtô dia A ary ny an'ny fiara B. Ny hafa kosa dia karatra ho an'ny fiara lehibe kokoa (kamiao, bus...).
Daty nahaterahana Io no fampahalalana farany angatahan'izy ireo aminao ary izany dia ny hahazoana antoka fa ianao tokoa izany.
Raha marina ny zava-drehetra dia hahazo efijery ianao izay ahitanao ireto data ireto:
Fampahalalana manokana. Izany hoe anarana, anaram-bositra, karapanondro... ny anao mba hojerenao fa marina (raha misy lesoka dia aleo ahitsy haingana).
Tipo fitsapana. Raha toa ianao ka tsy hijery fotsiny raha nandalo ny teorika ianao, fa ny azo ampiharina ihany koa.
Daty fanadinana. Oviana ianao no nandinika ny tenanao?
Fahafaham-pahaizana. Ity no angona angatahana indrindra. Ary eto dia tokony ho fantatrao fa, raha miteny hoe "Apt" ianao dia nandalo ny teoria. Raha misy milaza hoe "Tsy mety" dia tsy maintsy miverina mianatra ianao mba hanehoana ny tenanao indray.
Nanao fahadisoana. Izany dia manondro raha nanao fahadisoana ianao tamin'ny fanadinana teorika (na tamin'ny fanadinana pratika) sy ny zavatra nataony.
Ahoana no hijerena ireo lesoka nataoko?
Betsaka ny olona, ​​na dia manaiky aza, Te hahafantatra ny fahadisoana nataony izy ireo mba hianarana avy amin’izy ireo. Ary satria fantatry ny DGT fa te hifampidinika amin'izy ireo ihany koa ireo mampiato azy ireo, dia navelan'izy ireo izany fizarana izany mba ho hitanao, fa amin'ny fomba "miafina". Ary izany no izy tsy holazainy aminao izay tsy nety nataonao, fa ny halehiben'ny fahadisoana.
Eny, ny fanadinana pratika ihany no holazainy aminao, ao amin'ny teorika dia azonao atao ny mametraka ny isan'ny fahadisoana, saingy tsy hamaritra izay fanontaniana napetraka.
Raha ny fahadisoana mpanamory dia manana telo ianao:
Fanalahidy fanafoanana. Fanitsakitsahana lehibe izy ireo ka, raha manao izany ianao, dia afaka manakana ny fitsapana ary mampiato anao eo an-toerana ny mpanadina.
Tsy ampy. Roa ihany no avela satria fahadisoana izay sakana.
Malemy. Izy ireo dia mamela anao hatramin'ny 10 ary malefaka indrindra.
Efa hainao ny valiny amin'ny fomba ahafantarana raha nandalo ny théorie aho. Mirary soa ho anao izahay rehefa mijery izany ary afaka manolotra ny tenanao tsy ho ela amin'ny mpanamory.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: LifeBytes » vaovao » Ahoana no ahafantarana raha nandalo ny teoria aho
mpamoaka horonantsary an-tserasera